Ndatenda Pandemic neMutsa, mweya wenharaunda uye zvakadzika hukama hwevanhu |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Ndatenda Pandemic neMutsa, mweya wenharaunda uye hukama hwakadzama hwevanhu
Vazhinji vedu tinoona nyika isati yatanga denda senzvimbo ine hutsinye uye inowanzoita hutsinye, izere nenyaya dzekutsva kusingapere uye kurwira nguva dzose kwekuvandudza 'hutano'. Asi tsvagiridzo nyowani kubva kuAXA yegore negore Mind Health Study inoratidza kuti kunyangwe iyo UK iri kurwara nehurwere hwepfungwa kupfuura dzimwe dzeEurope, nyika yakashandurwa kutenda, muchikamu, kune denda reCCIDID-19, Brits ichiwedzera tsitsi nekunzwira tsitsi. semagumo.
Yechipiri edition yeAXA Mind Health Study ndeyekutarisa kwakadzama mune yazvino mamiriro ehutano hwepfungwa pakati pe11,000 vanhu vari munyika gumi neimwe uye matunhu muEurope neAsia. Inopa mufananidzo wakadzama wemafambiro akaita vanhu mupfungwa pakukwirira kwedenda uye nekupfuura, tichitarisa zvakanyanya maziviro avakaita nekugadzirisa matambudziko uye nekuchinja kukuru kwakaitika nekuda kwechiitiko ichi.
Chidzidzo ichi chinoburitsa kuti UK ine mwero wepamusoro wehutano hwepfungwa muEurope, nevanhu vaviri muvashanu (37%) vane chirwere chimwechete chepfungwa uye vangangoita kota (24%) 'vari kunetseka', maererano neAXA Mind. Health Index.1 Zvisinei, tsvakurudzo inoratidzawo kuti maonero akapoteredza hutano hwepfungwa ari kuchinja mune imwe nzira yakanaka. Zvakawanikwa zvinoratidza kuti denda iri rave gurusa mukubatsira kubvisa chiseko chehutano hwepfungwa muUK1 uye rakakurudzira vanhu vazhinji kuti vataure pachena nezvematambudziko avo. mhedzisiro yedenda iri, nepo chikamu chimwe chete muzvitatu (2%) chevaEurope vanotenda zvakafanana.31 Half (1%) yeBrits vanonzwawo kuti vanokwanisa kubvuma zviri nani apo vangada rutsigiro uye 49% vakashuma kuti vanonzwira tsitsi. vamwe vakaenzaniswa nepre-denda.
Mutsa netsitsi, kune isu pachedu uye kune vamwe, mhedzisiro inogara zvichienderana nedata, nehafu (50%) yevanhu veku UK vachibvuma kuti vari kuzviitira mutsa pamwe ne53% vachinzwa kuti kuchengeta vamwe kunonyanya kukosha. zvakakosha kupfuura zvazvaive makore maviri apfuura.
Tsvagiridzo iyi inopa mufananidzo werudzi rwuri kusimukira, rune ruzivo rwedenda iri richiunza hukama hwakadzama hwevanhu, sezvikamu zvitatu kubva muzvishanu (58%) zveBrits zvinonzwa kuti hushamwari nehukama hwave hunoreva. Kubasa, nezvikamu zviviri kubva muzvishanu (2%) zvevashandi zvino vachinzwa kuti kuva nehukama hwakasimba nevanoshanda navo kwakakosha kune hutano hwavo hwepfungwa uye vanopfuura hafu (42%) vari kuedza kuve netsitsi kune vavanoshanda navo.
Vanhu vakavakawo hukama hwakasimba uye hune chinangwa nevavakidzani vavo, nhanho inogona kuve nguva yekudiridza mweya wenharaunda uye mutoro wevagari muUK:
Vanosvika hafu (47%) parizvino vane hanya nekugara zvakanaka kwenharaunda yavo uye 42% vanofunga kuti nharaunda dzavanogara dzave hushamwari nekuda kwedenda iri, vachizivawo kukosha uye kukosha kwenharaunda dzavo.
Vaviri-vashanu (39%) vanonzwa kuti nharaunda yavo yave nzvimbo ine mutsa uye ine hushamwari yekugara kubva denda.
Vaviri-vashanu (38%) vave pedyo nevavakidzani vavo uye nenharaunda yenzvimbo
Vamwe vatatu muzvishanu (61%) veBrits vakaita chiitiko chetsitsi panguva yedenda, uye 38% vakati vanga vari pamagumo ekugamuchira mumwe.
Mhedzisiro yemutsa uye kunzwira tsitsi mune zvese zvemagariro uye zvebasa zvigadziriso hazvigone kudzikiswa. Avo vakashuma kuita zviito zvomutsa zvisina mwero vakati zvakavaita kuti vanzwe vagutsikana uye zvakaunza mufaro kwavari.
“Denda iri rakanganisa masocial network uye rakatimanikidza kuumba hukama hutsva padyo nepamba. Mutsa inzira huru yekuita shamwari itsva, uye denda rakapa mikana yakawanda yekubatsira vamwe. Sezvinoratidzwa neongororo iyi, vanhu vakatora mikana iyoyo. Uye zvinoenderana netsvagiridzo yapfuura, vakaona kuti kubatsira vamwe kune mubairo wakadzama. Somugumisiro, vanhu vakasvika pakuona nzanga dzavo dzomunzvimbomo senzvimbo dzine ushamwari. Ndinovimba vanhu vachatora hunyanzvi hutsva hwekugarisana navo kuti vashande, uko kutsigirana pamwe nekushandira pamwe kwakakosha kukambani inofara uye ine hutano. " Dr. Oliver Scott Curry, Mukuru Wekutsvagisa paKindness.org.
The AXA Mind Health Study inoratidzawo nzvimbo dzebasa dzinoda kuvandudza rubatsiro rwehutano hwepfungwa kuvashandi, uye 40% chete yevanhu vanobvumirana newavanoshandira anopa rubatsiro rwakanaka maererano nehutano hwavo hwepfungwa. vangangove vachifara, uye nekaviri mukana wekuti ubudirire. Izvi zvinoratidza kuti kupa rubatsiro rwakanaka rwehutano hwepfungwa kubasa hakungobatsiri sangano pacharo, asi nzanga yose zvakare. Inogona zvakare kuita basa rakakosha mukubatsira kudzikisira kushushikana pahurongwa hwehutano hweveruzhinji, hwakaiswa pasi pekunetseka kusati kwamboitika nekuda kweCOVID-1.
"Kunyangwe zviri maererano nekuona kuti UK iri kusangana nehuwandu hwehurwere hwepfungwa muEurope, pane chikonzero chetarisiro mune zvakawanikwa zvinoratidza kuti UK iri kushanduka kuita nyika ine mutsa, inonzwira tsitsi uye yakatarisana nenharaunda. Zvakakosha, tiri kuonawo kudzikira kwerusarura rwakatenderedza hutano hwepfungwa uye kuzivikanwa kwakakura kwekuda kutaura nezvenyaya idzi uye kutsvaga rubatsiro kana matambudziko amuka.
"Seinishuwarenzi, isu tinotenda zvakasimba kuti basa redu haringogumiri pakungopinda kana zvinhu zvashata, uye tinovimba yedu AXA Mind Health Study inogona kuita sechinhu chakakosha chekutsigira vanhu, mabhizinesi, vashandi vehutano uye vanoita zvemitemo pavanenge vachikura. nzira yavo yehutano hwakanaka hwepfungwa.
"Mushure memakore maviri akaoma zvakanyanya kumunhu wese, chidzidzo ichi hachifanire kupa chete kumuka asiwo maonero akanaka uye ane tariro - nyika yepashure pedenda inotaridzika kuva nzvimbo ine mutsa kuti isu tese tirarame." Claudio Gienal, CEO kuAXA UK&I.
Europe utano tsvakurudzo